IGulf yaseVenezuela | Ukuhamba kwe-Absolut
daniel | | ECaribbean
El KwiGulf yaseVenezuela (okanye iGulf of Coquivacoa yamaColombia) sisiqu samanzi esikumantla oMzantsi Merika, ethi kwindawo yayo enkulu ihlale kumanzi Venezuela. Inxalenye encinci ye-gulf ibekwe kunxweme lweLa Guajira de Kholambiya, yiyo loo nto kukho iingxabano ezininzi phakathi kwala mazwe mabini nanjengoko engakhange akwazi ukuchaza umda waselwandle.
Idityaniswe kwiGulf of Maracaibo ngomjelo omxinwa, iGulf of Venezuela ibekwe kwiPleyiti yoMzantsi Merika, nje kuphela kumda apho ingqubana khona nembasa yeCaribbean. Ubunzulu bayo buphakathi kwe-15 ukuya kwi-60 yeemitha.
1 Ukuhlola kunye nejografi yeGulf yaseVenezuela
2 Ioyile evela kwiGulf of Venezuela
3 Iingxabano zommandla neColombia
Ukuhlola kunye nejografi yeGulf yaseVenezuela
Uhambo lokuqala lokuhlola kwiGulf of Venezuela luqala ngonyaka we-1499. Umntu wokuqala waseYurophu ukuhamba kula manzi yayiyiSpanish. UAlonso ojeda, ehamba nomzobi weemaphu UJuan de la Cosa nangomatiloshe wase-Italiya IAmerican vespucio. Kwiminyaka emibini kamva iiKumkani zaseSpain zanika u-Ojeda ilungelo lokuhlala elizweni. Kwakungokokuqala ukuba kusekwe indawo yobukoloniyali kwilizwekazi, ukusukela ngoko oko kwenzeka kuphela kwiziqithi zeCaribbean.
Ngexesha leminyaka yokuqala yobukho beSpanish kulo mmandla, le ndawo yaziwa njenge Coquivacoa, ekusenokwenzeka ukuba ibhekisa kwisizwe sasekhaya. Sele inkulungwane yeshumi elinesixhenxe, amaxwebhu okuqala athetha ngeGulf of Venezuela avela ngegama langoku.
Nangona kukho impikiswano malunga noku, igama elithi "Venezuela" belinokuvela njengesiphumo ubukho bezindlu zesitayile semveli kunxweme. Ezi zakhiwo zakha uthungelwano lwemijelo ecaleni konxweme ekhumbuza abemi baseYurophu ngemijelo yaseVenice. La mazwe matsha aya kuthiwa "yiVenezuela", oko kukuthi, "iVenice encinci."
Imephu yeGulf yaseVenezuela
Imida yeGulf yaseVenezuela iphawulwe Usingasiqithi weGuajira (EColombia) entshona kunye IParaguaná Peninsula (Venezuela) empuma. Emantla, Isiqithi seMonks ithathwa njengomda wendalo phakathi kwe-gulf kunye namanzi avulekileyo oLwandle lweCaribbean. Emazantsi, amanxweme aseVenezuela aseZulia naseFalcón. Phakathi kwabo Isiteshi seMaracaibo, Idibanisa amanzi eGulf kunye nawo KwiNxweme yaseMaracaibo, uhlobo lolwandle lwaseVenezuela.
Ukusuka empuma ukuya entshona, lo msantsa uneekhilomitha ezingama-270 ubude. Amazibuko aphambili kule ndawo IMaracaibo kunye nePunto Fijo, kokubini kummandla waseVenezuela.
Ioyile evela kwiGulf of Venezuela
IGulf of Venezuela inayo ubuchule obukhulu beqhinga kunye noqoqosho. Kwinqanaba lobuchule, njengoko iyindlela yokudibanisa phakathi kweGulf of Maracaibo kunye noLwandlekazi lweAtlantic; ngokwezoqoqosho, ngenxa yobukho phantsi kolwandle lwayo lweengxowa ezibalulekileyo ze ioyile kunye negesi yendalo.
Ukucocwa kweAmuay, eyona inkulu eVenezuela
IVenezuela ixhaphaza oovimba bendalo, ngakumbi ioyile. Ukukhutshwa kweoyile ekrwada yeyona nto iphambili kwezoqoqosho kulo mmandla. Zininzi izinto zokucoca. Eyona inkulu kwezi Amuay, inezibuko layo kwaye eyenzeka njengeyona ndawo inkulu yokucoca elizweni. Esona sixhobo sokucoca sibalulekileyo sibizwa ngokuba UCardon, emi kumazantsi mpuma usingasiqithi weParaguaná.
Ubutyebi obuvela kwioyile bubalulekile ukugcina uqoqosho lwaseVenezuela. Nangona kunjalo, eli shishini kwiGulf linalo Iziphumo ezibini ezimbi:
Kwelinye icala, i ukonakaliswa kwendalo kommandla, eliguqulela ekunyamalaleni kwamatye amaninzi eekorale kunye nesoyikiso sokuphela kwezinto ezininzi ezihlala kuzo, ezinje ngeziponji noofudo baselwandle.
Kwelinye icala, iingxabano zommandla kunye neColombia engummelwane ngenxa yokufikelela kubutyebi bendalo.
Iingxabano zommandla neColombia
Ngaphandle nje kokuba phantse yonke indawo yaseVenezuela, kukho imbali Ingxabano phakathi kweColombia neVenezuela ngenxa yobukhosi kunye nolawulo lomsantsa. Ilizwe ngalinye liyazikhusela kwimidla yalo iimpikiswano yobunzima:
Ukungenelela kwe-corvette Caldas emanzini omsinga kubangele isiganeko esibi phakathi kweColombia neVenezuela ngo-1987
Ngokutsho kwabantu baseColombia, iArchipelago yeeMonks ayinakuthathwa ngabantu baseVenezuela njengesalathiso sokumisela umda wamanzi endawo. Ngale ndlela, iColombia iya kungqinelana nenxalenye elungileyo yamanzi eGulf yaseVenezuela, ngakumbi kwisiqingatha esisemantla. Nangona kunjalo, abantu baseVenezuela baqinisekisa ukuba ayisiyiyo kuphela le ireferensi ukuba isebenza, kodwa bakwathi banamanzi angaphakathi eGulf of Venezuela.
Endaweni yokuba isonjululwe, oku kungavisisani kuqhubekile ngokuhamba kwexesha, kunika ingakumbi ixesha elinzima phakathi kwala mazwe mabini. Esona siqendu "sasishushu" kolu ngquzulwano senzeka nge-9 ka-Agasti ka-1987. Le ngxaki isoyikise ukuba ijike ibe yimfazwe exhobileyo kunye nokuhlanganiswa komkhosi ngamaqela omabini. Ngethamsanqa, wakwazi ukuphelisa ukunyuka kwemfazwe kunye nokubuyela kwe-corvette kumanzi aseColombia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » KwiGulf yaseVenezuela
Indlu ka-Al Capone eVaradero